polyolefin ကျုံ့လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်လိပ်ကာစ်တ် China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Roll,Polyolefin ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ချုံ့,Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ကာစ်
 Homeထုတ်ကုန်များဆန့်ရုပ်ရှင်စက်ဆန့်ရုပ်ရှင်polyolefin ကျုံ့လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်လိပ်ကာစ်တ်
ထွက်နိုင်ရေး: 5000 tons/years
polyolefin ကျုံ့လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်လိပ်ကာစ်တ် ယင်း၏လျှော့ချမျက်ရည်များ, ခေါက်အနားကဆက်ပြောသည်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိများကိုစဉ် Polyolefin ရုပ်ရှင် Ultra-ပါးလွှာ gauge, thereforce ဖြစ်ပါတယ်ကျုံ့, အများဆုံးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိအဖြစ် Eco-friendly ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်, ဒါကြောင့်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်လျော့နည်းစေသည်။ သို့ကာစ်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်သာသူ့ဟာသူကပ်လျက်နှင့်အိမ်တွင်းနှင့်အိမ်ပြင်အသုံးပြုသောပစ္စည်းများကိုခြုံနဲ့ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပြီးသုံးစွဲဖို့အလွန်လွယ်ကူသည်။ လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးပြီးလိပ်ကယ့်ကိုချွေထုပ်ပိုးဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။
25 မိုက်ခရွန်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်ကိုအောက်တွင် M ကသတ္တုရိုင်းသတ်မှတ်ချက်စစ်ဆေးမှု:
စက်လမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်အော်တိုနဲ့ကို semi-automatic ထုပ်ပိုးပြီးရုပ်ရှင်ထုပ်ပိုးစက်များအတွက်အသုံးပြုသည်။ ကျနော်တို့စိတ်ကြိုက်ပလပ်စတစ်လမ်းပိုင်းလိပ် (OEM အရွယ်အစား, အရောင်, ထုပ်ပိုး) လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါဂျမ်ဘိုလမ်းပိုင်းရုပ်ရှင် CAST နည်းပညာကိုဖန်ဆင်းတဲ့အရည်အသွေးမြင့် Multi-သက်တမ်းထပ်တိုးရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာလက်စွဲစာအုပ်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်ရုပ်ရှင်သို့ထပ်မံအပြောင်းအလဲနဲ့များအတွက်အသုံးပြုထုပ်ပိုးအကောက်ခွန်များအတွက်အသုံးပြုသည်။
●စူပါန့ ်. အရည်အသွေး
● Superior ထိုးဖေါက်ခြင်းခုခံ
ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံလမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်ကိုလှိမ့်မှပါးလွှာစက္ကူ core ကိုအသုံးပြုပါကအတူတူပင်စုစုပေါင်းအလေးချိန်အောက်တွင်ထိန်းထားနိုင်တယ်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်အသားတင်အလေးချိန်နဲ့အခြားပေးသွင်းထက် သာ. လေးဖြစ်ပါတယ်။
ကို C ertificate:
ကျနော်တို့ရိုးသားမှု, အရည်အသွေးနှင့်သင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုသေချာစေရန်နှင့်သင့် needs.Yalan ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည် '' supprot နှင့်စောင့်ရှောက်မှုပြန်သွားဖို့ပိုကောင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များကိုပါလိမ့်မယ်တွေ့ဆုံရန်မျှော်-lokking တို့နှင့်ကြီးသောဖြစ်ခြင်းမှတ်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : ဆန့်ရုပ်ရှင် > စက်ဆန့်ရုပ်ရှင်
Black ကလမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်ဂျမ်ဘိုလိပ်ကိုနှင်ထုတ် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
နယူးပုံစံပလပ်စတစ်ထုပ်ရုပ်ရှင်ထုပ်ပိုးပြီး pallet လမ်းပိုင်း အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
20 "1500 ပေပွင့်လင်းပလပ်စတစ်လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးပြီးရုပ်ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
တရုတ်ဖျခွန်အားဖြစ်ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော် Roll အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လက် pallet ထုပ်ကျုံ့ထုပ်ပိုးပြီး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လိပ်ထုပ်ပိုး Lldpe ထုပ်ပိုးပြီးလမ်းပိုင်းရုပ်ရှင်စက္ဏူထူ အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
စက်ရုံ pe ပစ္စည်းအနက်ရောင်လက်ဆန့်ရုပ်ရှင် အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Roll Polyolefin ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ချုံ့ Stretch ရုပ်ရှင်ပွဲတော်သို့ကာစ် လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Pallet လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Moving လမ်းပိုင်းထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင် Black က လမ်းပိုင်း Pallet ထုပ်ပိုးခြင်းအလှဆင်